आधुनिक वेब विकास को १० आज्ञा | Martech Zone
बिहीबार, फेब्रुअरी 15, 2007 मङ्गलबार, अक्टोबर 4, 2011 Douglas Karr
संचार सफ्टवेयर कम्पनीको साथ उत्पाद प्रबन्धकको रूपमा महत्वपूर्ण हो। हालसालै, मैले कार्य गरे र हाम्रो वेब टोलीमा वितरित गर्न निम्न वेब आदेशहरूको "आदेशहरू" प्रकाशित गरे। प्रत्येक आधुनिक वेब विकासकर्ता (वा अनुप्रयोग) ले यी दश आज्ञाको पालना गर्नुपर्दछ।
त्यहाँ फैन्सी छन् प्रोग्रामिंग सर्तहरू ती सबैको लागि बाहिर फ्याँक्न सकिन्छ; जे होस्, मेरो लक्ष्य यो सामान्य सर्तमा राख्नु थियो जुन सफ्टवेयर पेशेवरहरूले (र तपाईले पनि) बुझ्न सक्दछन्।
ब्राउजर, ब्राउजर संस्करण वा अपरेटि system प्रणालीको पर्वा बिना, सँधै इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूको support support% समर्थन गर्नुहोस्। तदनुसार समायोजन गर्नुहोस् र बिटा रिलिजको साथ सँधै तयार हुनुहोस्।
सबै लेआउट शैलीहरू र अनुप्रयोग छविहरूका लागि डीटिडी र क्रस-ब्राउजर अनुरूप कास्केडि Style शैली पानाबाट संदर्भ, अनुप्रयोगको लागि सँधै एक्सएचटीएमएल कम्प्यालिन्ट कोड प्रयोग गर्नुहोस्।
सँधै सन्दर्भ तत्वहरू मार्फत पाठ र स्ट्रिंगहरू सन्दर्भ गर्दछ जुन कुनै क्यारेक्टर सेटलाई समर्थन गर्दछ र कहिले पनि बिल्ड आवश्यक पर्दैन।
GMT मा सँधै मितिहरू र समयहरू सन्दर्भ गर्दछ जुन कुनै पनि प्रयोगकर्तालाई आउटपुट परिमार्जन गर्न अनुमति दिन्छ उनीहरूलाई कसरी इच्छा छ।
जहिले पनि प्रत्येक सुविधाको लागि एक एकीकरण तत्व निर्माण गर्नुहोस्।
सँधै आरएफसी मानकमा निर्माण गर्नुहोस् (पाठ ईमेलहरू, HTML ईमेलहरू, ईमेल ठेगानाहरू, डोमेन सन्दर्भहरू, आदि)
सँधै मोड्युलर निर्माण गर्नुहोस्। यदि अनुप्रयोगमा जहाँसुकै एक भन्दा बढि विकल्प छन् भने तपाईले निर्माणको आवश्यकता बिना नै थप थप्न सक्षम हुनुपर्नेछ।
यदि एप्लिकेसनको एक भन्दा बढि भागले यो गर्दछ भने, एप्लिकेसनको सबै अंशहरूले एकल बिन्दु सन्दर्भ गर्नुपर्दछ।
तपाईले के खरीद गर्न सक्नुहुन्न कहिले पुन: सिर्जना नगर्नुहोस् र तपाईले जे खरीद गर्नुभयो त्यसलाई समर्थन गर्न सधैं हाम्रो अनुप्रयोग समायोजित गर्नुहोस्।
यदि प्रयोगकर्ताहरूले यो गर्न सक्दछन्, तब हामी यसलाई समर्थन गर्दछौं। यदि तिनीहरूले यो गर्नु हुँदैन, हामीले यसको लागि मान्य गर्नुपर्दछ।
के गीक किन्न सबै जो संग छ?
सहमत जबकि पोइन्ट on मा आधारित। म विश्वास गर्दछु कि वेब विकासमा पनि, डाटा, प्रतिनिधित्व (GUI'S) र व्यवसायिक तर्क सँधै MVC मोडेल आधारित दृष्टिकोणमा आधारित भएर अलग गर्नुपर्दछ।
यो वृद्धि हुनेछ, सफ्टवेयर गुणस्तर, र स्केलेबिलिटी।
धन्यवाद, एन्ड्रियास! यो पक्कै # of को भावना हो - तपाईंको टिप्पणी विज्ञापन धेरै अधिक स्पष्टता।